ỌJI: ka esi eleta ọbịa mgbe mbu na otu ọ dị ugbu a | odumblog
Onuorah Jennifer1 year ago4 comments
posted on Jul. 17, 2019 at 7:27 am July 17, 2019
Ịleta ọbịa bụ otu ihe e jiri mara ndi Igbo. Nke a mere e ji nwee ụdị okwu a, ‘akọkwalam ọnụ ọjị’, ma ọ bụrụ na onye a biara na nke ya enweghi ihe ọ wepụtara. Na mgbe ochie, mgbe ọ bụla nwoke chọtara nwoke ibe ya, ọ na-ewepụta ọjị Igbo were nye onye biara na nke ya. Mgbe ụfọdụ, a na-enyekwa nzu, mmanya ngwọ, anụ amịkpọrọ amịkpọ ma ọ bụ nri. N’ebe ụmụnwanyị nọ, nleta a na-enye nwaanyi ọbịa bụ nri, mmanya ma ọ bụ onyinye ndi ọzọ’
Ụdị nleta a na-enye ọbịa gbadoro ụkwụ na ụdị onye ọ bụ ma ọ bụ emume a na-eme. Ọjị Igbo bụ ihe ụmụnwoke na-enyekarị ibe ha. Ọjị bụkwa mkpuru a na-akwanyere ugwu n’omenala Igbo. Ọ bụghị ihe a na enye ụmụaka ma ọ bụ ụmụnwanyi n’ọgbakọ. Ọ bụ nwoke bụ okenye na-awa ọjị ma ọ bụrụ na agọchaa ya. Ọjị na-agbakari ibe dị iche iche; o nwere ike igba abụọ, atọ, anọ, ise dgz. Iberibe ole ọjị gbara nwere ihe ọ pụtara n’ala Igbo;
Ọjị gbara otu ibe bụ Ọjị ogbi, Ọ pụtaghị ezi ihe
Ọjị gbara mkpị abụọ n’ agla Igbo apụtaghị ezi ihe
Ọjị gbara atọ, Ọjị Ikenga, bụ ezigbo Ọjị.
Ọjị gbara anọ na-egosi ahịa anọ ndị Igbo; Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ọ bụ ezigbo Ọjị
Ọjị gbara ise were dịrị gaba bụ ezigbo Ọjị na-egosi agamnihu
Enwere ọtụtụ uru ọjị bara na mgbe ochie:
E ji ya eleta ọbịa
E ji ya ekpe ekpere
E ji ya alụ nwaanyi,
E ji ọjị edozie esemokwu,
E ji ya aṅụ iyi
Ka ọ dị ugbu a, ugwu a na-enye ọjị abụrụla ihe e chefuru echefu; a na-atazi ya otu na mgbe ọmasịrị onye ọ bụla. Ụfọdụ ji ọjị achụ ụra. Mana mgbe ọ bụla a na-eme nnukwu mmemme dịka ili ozu, ịlụ nwanyị, ichi echichi, ọjị a naghị akọ ebe ahụ. Mana abịa n’ileta ọbịa, ndi mmadu na-enyezi ihe sọrọ ha. Mgbe ụfọdụ anaghị enye ihe ọ bụla; onye ahụ nọchaa ọlawa n’ihi na ewerela akụkọ mere ya ọjị.
Ugbu a, ndi Igbo na-achọzi ịnọrọ onwe ha; onye ọ bụla na-abụghị ikwu ma ọ bụ ibe, achọghị ha n’ihi na a na-ahụ ha dịka mmekpa ahụ.
Dịka onye Igbo, ịka na-anabata onye ọbịa?
Kedu ụdị ọjị ị na-enye ha?
Nwaada Amarachi Ọnụọra
Tags:About ojiAfricaAgout ndi Igbobenefits of OjiCustomIgboIgbo CosmologyIgbo customIgbo traditionKolanutKolanut and VisitorsLessons in IgboNigeriaOdumblogOji
Onuorah Jennifer July 17, 2019
ỌJI: ka esi eleta ọbịa mgbe mbu na otu ọ dị ugbu a | odumblog – odumblog.com
Mel Loyd says:
Kendrick Carden says:
Kai Halford says: